मध्यराति काठमाडौंमा घट्यो दुखद घटना, विभत्स अवस्थामा भेटियो युवतीको शब, को-को परे पक्राउ ? — Sanchar Kendra
मध्यराति काठमाडौंमा घट्यो दुखद घटना, विभत्स अवस्थामा भेटियो युवतीको शब, को-को परे पक्राउ ?
काठमाडौं, ३ बैसाख ।
राजधानी काठमाडौंमा आइतबार राति एउटा कहालीलाग्दो घटना घटेको छ । काठमाडौंकाे बसुन्धारास्थित सुकुम्बासी टोलमा एक युवतीको विभत्स हत्या भएको छ। आईतबार राति करिब करिब १० बजेतिर युवतीको विभत्स हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक युवतीको सनाखत भने हुन सकेको छैन।
लगाएको कपडा च्यातेर अर्धनग्न अवस्थामा सुकुम्बासी बस्तीको करिडोरमा फालेको अवस्थामा युवतीको शव फेला परेको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए। घटना गम्भीर प्रकारको रहेको र घटनाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको एसएसपी पोखरेलले बताए।
मृतक युवतीको टाउकोमा धारिलो हतियारले हानेर रगताम्मे भएको अवस्थामा शब फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। शवलाई पोष्टमास्टर्मका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लगिएको छ।
यसैबीच युवती हत्याको अनुसन्धान गर्न प्रहरीले ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ। ‘संकास्पद अवस्थामा रहेको ८ जना नियन्त्रणमा लिएका छौ,’ महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका डिएसपी योगेन्द्र थापाले भने, ‘अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन, अनुसन्धान गर्दै छौ।’
पछिल्लोसमय हत्या र बलात्कारक घटनाहरु निक्कै ब्यापक मात्रमा घटिरहेका छन् । नेपाली महिला र बालिकाहरु निक्कै असुरक्षित बनेको पनि महसुस गरिरहेका छन् । राज्यको माथिल्लो तहमा बस्ने र राज्य संचालकहरुले हत्या र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधीहरुलाई सजिलै उन्मुक्ति दिन थालेका कारण घटनाहरु व्यापक बनेको स्थानीयहरुको बुझाई छ ।